कुनै बेला हङकङमा हामीले गीतमा पुनरसंरचनाको खाँचो र आवश्यक्ता बारे बहशहरू गर्यौ । त्यसपछि आदिवासी गीतकार समाज पनि गठन गर्यौं । त्यति मात्र होईन हामीले 'आदिवासी' नामक गीति एलबम पनि सार्बजनिक गर्यौं । हामीले लेख्ने र गाउँने गीतमा अनि हामीले बनाउँने संगीतमा आदिवासी पीडा, आदिवासी सौन्दर्य र साँस्कृतिक पक्ष हावी होस्‌ भन्ने आग्रह राख्यौं । त्यो आग्रह भनेको गीतमा सचेतनाको कुरा हो । त्यो राजनैतिक या सामाजिक या साँस्कृतिक या जातिय कुनै पनि हुन सक्तछ । कारण गीत संगीत सर्बाधिक सम्प्रेषणीय हतियार हो । यसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोगले धेरै देश-ठाउँहरूमा राजनैतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू सफल पनि भए । तर हामी त्यसो भन्दैमा आम मानिसले लेख्ने, गाउने र सुन्ने गीत संगीतको बिरोधी भने होईनौं । गीत संगीत संसारमा सबैभन्दा लोकपृय बिधा हो जसलाई मन नपराउने मानिस सायदै होलान् ।
निरर्थक कार्यमा लगानी गर्नको कुनै अर्थ छैन (Let’s not make effort for nothing) । समय सिमा भित्र नयाँ संविधान ल्याउनु पथ्र्यो, ल्याउन सकेनौ । तिमीहरु चाहान्थ्यौ तर सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको आयु तोकि दिएको थियो तसर्थ त्यसको मृत्यु भै सकेको छ, । जो कोहीले ढुंगामा टाउकै पछारे पनि त्यो ब्युँतिनेवाला...
एक जना साथीले मलाई सोधे ‘हैन ददी जी, तपाइ बाहुन भएर किन जातिय अधिकारको पक्षमा चर्किनुहुन्छ रु जातिय अधिकार भो भने त बाहुन क्षेत्रीलाई लघार्छन् नी ठाउँ ठाउँबाटै।’मैले उनैलाइ जिज्ञासा राखें ‘ए जातिय राज्य भन्न खोजेको मन नपरेका अरु जात, जाति, भाषा भाषीलाइ लघार्ने भनिएको हो ।यी जनजातिले बाहुन क्षेत्रीला...
खस भाषालाई मात्र नेपाली भाषा मान्ने हो भने खस भाषा नजान्ने चाहि नेपाली हुन कि होइन्न ? नेपाली हुनलाई के खसभाषा अनिवार्य जानेकै हुनुपर्दछ ? त्यसैले संविधानमा स्पष्ट ब्याख्या होस नेपालभित्र बोलिने सबै भाषा नेपाली भाषा हुन र सम्पर्कको भाषा ‘खस नेपाली’ भाषा हो । खस भाषालाई नेपाली भाषा भन्नु ख...
विश्व बिख्यात तानशाह एडोल्फ हिट्लरले आफु जन्मेको घरलाई वाउ आमाको घर भनेका छन् त्यस्तै मैले पनि आफु जन्मेको घर र मेरो जन्मस्थान बाघा गाउँलाई वाउ आमाको घर भन्न रुचाउँछु मेरो वाउको गाउँ भन्न रुचाउँछु किनकी त्यो गाउँमा मेरो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व नभएक...
राष्ट्र राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्ध जतिसुकै बिग्रिए पनि जातीय गालीगलौज गर्ने जस्तो अति गम्भीर भूल प्रायः अहिले विश्वमा कतै हुने गरेको छैन । तर दुर्भाग्यको कुरा जुन कुकार्यदेखि सारा विश्व सचेत छ, त्यही दुष्कर्म यस देशमा जथाभावी भइराखेको छ । दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रा देशका कतिपय ...